Clonezilla Live ikozvino inosvika neLinux kernel 5.15 LTS | Linux Addicts
Clonezilla Live inozivikanwa inorarama bhutsu yekugovera yakavakirwa paDebian Sid repository, sezvo ichipa akawanda maturusi ekugadzirisa matambudziko, kudzoreredza, disk image cloning, partitioning, nezvimwe. Uku kugoverwa kunochengetwa naSteven Shiau, uye achangobva kuzivisa kuburitswa kwe Clonezilla Live vhezheni 2.8.1, iyo inofambiswa neLinux 5.15.5 LTS kernel nekukasira.
Mushure memwedzi nehafu yekuvandudzwa, mushure mekusunungurwa kwevhezheni 2.8, yakazosvika. Iye zvino unogona kudhawunirodha uye kushandisa Clonezilla Rarama 2.8.1 ne imwe yazvino kernels yakaburitswa nerutsigiro rwenguva refu. Iyo yapfuura vhezheni yeiyi suite yakafambiswa neLinux 5.14, iyo yakasvika kumagumo ehupenyu hwayo kutenderera munaNovember 2021.
Iyi kernel haingorevi kuve neazvino zvigamba uye zvitsva zvinoshandiswa mukernel, zvakare mukana weClonezilla Live, iyo ichaona yakagadziridzwa tsigiro yehardware. Kune rumwe rutivi, kubatanidzwa kwe iyi kernel haisiriyo chete chinhu chitsva mune iyi vhezheni yeLive, kwakavewo nekuvandudzwa kwekutsigira kuona disks hd1, hd2, nezvimwewo, basa idzva rakawedzerwa kudzivirira faira yemufananidzo wekuparadzanisa kubva kupatsanurwa kana chifananidzo chachengetwa ne ocs-sr script.
Chimwe chitsva mune iyi vhezheni yeClonezilla Live ndechekuti yakawedzera tsigiro yekudhirowa kuvandudza iyo hurongwa kudzorera CentOS Linux 6.x. Nekune rimwe divi, tsikidzi dzinoverengeka dzaikanganisa shanduro dzakapfuura dzakagadziridzwa, kune zvakare zvigadziriso zvekuvandudza zvinyorwa, shanduro dzemitauro yakati wandei umo inowanika system yakagadziridzwa, nezvimwe.
Kana iwe uchifarira, unogona dhawunirodha ikozvino mahara zvachose woipisa ISO kune optical disc kana USB stick:
Dhaunirodha Clonezilla Live - Yepamutemo Webhusaiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Clonezilla Live ikozvino inouya neLinux kernel 5.15 LTS
Hapana zvinoshamisa: Ubuntu 22.04 ichashandisa Linux 5.15